Home » Buddhism » ပထမလား၊နောက်ဆုံးလား၊ကြိုက်ရာကို ရွေးစမ်းကိုယ့်လူ(၀ါဆိုလပြည့်လက်ဆောင်)
မနေ့က.. ယူအက်စ်ရဲ့နာမယ်ကြီးတရားဟောဆရာ.. Joel Osteen တရား TV ကတဆင့်နာရတယ်..။
အစ်မဒုံ နဲ့ အတူတူ ဝင်ပြီး ဓမ္မကုသိုလ် ယူချင်ပါရဲ့။
ဒီတခေါက်တော့.. ဒီလောက်ညွှန်းတာ.. ခေါင်းစဉ်လေးလည်းကောင်းသမို့.. နားထောင်မှပါလေဆိုပြီး.. ရုံးကွန်ပူတာကြီး..နာကြပ်လေးတပ်..
လူသားရဲ့ တန်းတူညီမှုအခြေခံလေးကိုတောင်.. မပြင်ပေးနိုင်သေးသူတရား.. မနာလို..။
အနည်းဆုံး.. ဆရာတော့်ကို ဒေါက်တာဘွဲ့သင်ပေးလိုက်တဲ့.. Oxford ဆရာတွေက. ဆရာတော့်အပေါ်ဆက်ဆံကြတဲ့အတိုင်းလောက်..
သူကြီး ရယ် ခဏလေး မျက်စိတော်လေး ကို ပိတ်ပြီး ရွှေနားလေး နဲ့ နားထောင်ပေးပါ။
အဲဒီလူတွေကို.. ဆရာတော်က.. ဒီလိုမလုပ်သင့်.. မလုပ်ကြဖို့.. ပြောဆိုသင်ကြားဖို့..တာဝန်အရှိဆုံးပေါ့..။
ဒီ မှာတော့ အဲလိုမရှိ။ လုပ်လဲ မလုပ်နိုင်လို့ လားတော့မသိ။
နောက်တစ်ခါ ဆရာတော် နဲ့ တွေ့ချိန်ကျရင် သူကြီးမင်း ရဲ့ သဘောထား ကို ပြောပြလိုက်ပါ့မယ်။
သဂျီးစိတ်ထဲမှာ သာသနာကို ကြည်ညိုလို့မရအောင် တားဆီးနေတဲ့ ရွှေခုံကြီးပေါ်တက်ထိုင်တော်မူနေတာကို တရားဟောဆရာတော်ကြီးတွေကို စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းပြောကြည့်ပါ။
ကံကောင်းရင်.. မသေပဲ.. ထောင်..၂နှစ်လောက် သာသနာညိုးနွမ်းစေမှုဆိုပြီး.. ထည့်ပေးဦးမှာ…။ ထည့်ဦးမှာ..။
ဒီ တရားး က အာတီဒုံ နာပြီးးလောက်ပြီ အရီးးး
.ပြဿနာက ဒီတိုင်းပြည်ထဲက အတော်များများဟာ
လိုချင်တာက ပထမဦးဆုံး အကောင်းဆုံး အမွန်ဆုံး။
ခိုနီဒုံဂျီးကို အူးခြပါဒလယ်…..
.ဒီနေရာမှာသဂျီး နဲ့ အရီးတွေ့ကြတာကိုး..ဟိုး..ဟိုးးးး
.နောက်ဆို ကြမ်းပြင်မှာထိုင်ပီးလက်ပကျွတ်နဲ့ရေးနော်) :))
President Obama forgot to salute when he boarded Marine One. He later realized his mistake and went back to the Marine. For more CNN videos, visit our site at http://www.cnn.com/video/
အမှန်ဒေါ့ ကြည်ညိုအူးခြ ယိုကျိုးကော်ရော်ဆိုဒါ ဆိတ်စန္ဒအလျောက် ဖြစ်တာပဲ ကောင်းတယ်။ တအူးဂျင်း ပုဂ္ဂလိက ရွေးခြယ်မှု ဖြစ်သင့်ဒယ်။ ဒါကို အစဉ်အလာ ထုံးစံ လှုပ်ပစ်လိုက်လို့ ခက်ကုန်ဒါ။
ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်။ သွား ၃၁ ဘုံထဲက လူ့ပြည် နတ်ပြည် ဗြဟ္မာ့ပြည် ။
တရားထိုင်ရင် အန်ဒေါ်ဖင်း ထွက်သဗျ…
အယာတိုလာ မာမွတ်ခိုမ် ဗာ ဘာသာ ကိုးကွယ်ပါသလဲ ခင်မြှာ..
ရွှေထိုင်ခုံပေါ်မှာထိုင်တာကိုပြောပြောနေတဲ့သဂျီးကို ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးအတွက် သံဃာတွေ ရွှေပလ္လင်ပေါ်မှာ ထိုင်မနေကြတဲ့အကြောင်းလေး။
တရား ထိုင်ရင် အန်ဒေါ်ဖင်း ထွက်သဗျ။